လ.၀.က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီကို ယုံရင် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသလို ဖြစ်လိမ့်မယ် .. | Burma Muslim
လ.၀.က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီကို ယုံရင် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသလို ဖြစ်လိမ့်မယ် ..
By burmamuslim on May 20, 2014	၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ဖြစ်လာကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေက အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရခဲ့တဲ့ အပြင် ရိုဟင်ဂျာ လွှတ်တော် အမတ် နှစ်ဦး ရှိခဲ့တာကလည်း မြန်မာ့သမိုင်းက ဘယ်တော့မှ ဖျောက်ပစ်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများရဲ့ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ အားလုံးကို ရေရှည်စီမံကိန်းချမှတ်ပြီး ရုတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ အဓိက တရားခံကတော့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံမဲ့ ဘ၀ ရောက်အောင် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး စနစ်တကျ မလုပ်ဆောင်ခင်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘိုးဘွား စဉ်ဆက် အထောက်အထား တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ စီမံကိန်းတွေ ချမှတ်ပြီး ဖျောက်ပစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ကတော့ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့တဲ့ နဂါးမင်း စီမံချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံတွင်းကနေ ဘင်္ဂါလီတွေလို့ သမုတ်ပြီး မောင်းထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည် လက်ခံခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ “ရိုဟင်ဂျာ” လူမျိုးလို့သာ မှတ်တမ်းတွေမှာ ရေးသွင်းပြီး လက်ခံခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရရဲ့ အဓိက စီမံကိန်းကတော့ အာရ်ကာန်ဒေသရဲ့ မူလဘူတ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး မပေးဘဲ၊ တဖက်နိုင်ငံက ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများ အသွင်ဖြင့် ပြုနိုင်ငံသား အဆင့်အတန်းနဲ့ ထားရေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စီမံကိန်းကို ရေရှည် စီမံကိန်း အဖြစ် ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်လာတာ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကဒ်ပြား (ပန်းရောင်ကဒ်) တွေမထုတ်ပေးခင် အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသား နှစ်မျိုးသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြားလို့ ခေါ်တဲ့ သက်သေခံ ကဒ်ပြားကို ပုံစံနှစ်မျိုး – သုံးခေါက်ချိုး၊ နှစ်ခေါက်ချိုး ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂဏန်း ၆ လုံးပါ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူများက မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ပြီး၊ ဂဏန်း ၅ လုံးနဲ့ FRC ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူတွေက နိုင်ငံခြားသားများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေထဲမှာ ဂဏန်း ၅ လုံးနဲ့ FRC ကဒ် ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိခဲ့ဘူး။ ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာများ အားလုံးက အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြား – နှစ်ခေါက်ချိုး၊ သုံးခေါက်ချိုး များကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၀ မတိုင်မှီမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သူတွေသာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ကို လျှောက်ထားဖို့ လိုခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဘိုး ဖြစ်တဲ့ ဦးအဒူဇော်လိလ်က သူ့ရဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကို မေးမြန်းခဲ့တဲ့ အခါမှာ တရားရေး ၀န်ကြီးဌာနက မူလဘူတ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်လို့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် လျှောက်စရာ မလိုဘူးလို့ အကြောင်း ပြန်ကြား ခဲ့ပါတယ်။ (တရားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြန်ကြားစာ မိတ္တူ ပုံတွင်ရှု)
တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ အားလုံးကို အခြားသော တိုင်းရင်းသားများ နည်းတူ ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ၁၉၇၀ ခုနှစ်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တစ်စတစ်စ ရုတ်သိမ်းလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကို မနေ့တစ်နေ့ကမှ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများ အဖြစ် ပုံဖော်နေပါပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ ဘာသာရေးကို အသုံးချပြီး ပုံဖော်လို့ ရနေပေမယ့်လည်း နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ သမိုင်း အထောက်အထား အပြည့်အစုံနဲ့ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီများ အဖြစ် ပုံဖော်လို့ မရပါဘူး။ မိမိတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပြန်လည် ရရှိရေး အတွက် အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှု တွေကို ခါးစည်းခံပြီး ချီတက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေနဲ့ အတူ နိုင်ငံတကာက အပြည့်အ၀ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က တောင်းဆိုနေသလို၊ ကမ္ဘာကလည်း ထောက်ခံ အားပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ အကျပ်အတည်း ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ လှည့်ကွက် ပေါင်းစုံသုံးပြီး သူတို့လိုရာကို ရအောင်လုပ်သွားဖို့ ကြိုးစားမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ ပြည်သူတွေ အင်မတန် ပါးနပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းချက် ကတော့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တာမို့ အခွင့်အရေးတွေ ပေးမယ်ဆိုပြီး မက်လုံး ပေးလာရင် သို့လော .. သို့လော နဲ့ စိတ်ထဲ တွေဝေ လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစပြီး စစ်အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက်၊ အခု ဘောင်းဘီချွတ် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ပြည်သူတွေကို အဓိက ထိန်းချုပ်နေတာ ကတော့ စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ် လ.၀.က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီရဲ့ စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး စတင်ပါပြီ ..
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နှစ်ကြိမ် အလိမ်ခံခဲ့ ရပြီးပြီလဲ? ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အတွက် ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲတုန်းက ရိုဟင်ဂျာ ပြည်သူတွေကို ဘာတွေ မက်လုံး ပေးခဲ့သလဲ? ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ ယနေ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဘောင်းဘီ မချွတ်ခင်တုန်းက ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောမှာ ဘာတွေ လာပြောခဲ့သလဲ? မှတ်မိကြပါရဲ့လား? ၁၉၉၂ ခုနှစ်တုန်းက ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ယာယီ ၀ှိုက်ကဒ်တွေကိုတောင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီမှာ ထုတ်ပေးခဲ့တာလို့ ပေါ်ပေါ်တင်တင် လိမ်ရဲတဲ့ လ.၀.က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီကို ဘယ်လို ယုံကြမှာလဲ? ပြီးတော့ မတ်လ သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်မှီမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ရေးခွင့်ပေးမယ်၊ ရိုဟင်ဂျာ စာရင်းကောက်တွေ ခန့်မယ်ဆိုပြီး အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကတိပေးပြီးမှ အနီးကပ်မှာ ကတိဖျက်ခဲ့တဲ့ လူလိမ် ဦးခင်ရီကို ယုံမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကိုယ် ခပ်တုံးတုံး ဓါးနဲ့ လှီးသလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တ၀န့် ရှင်းလင်းမှု ပေါင်းစုံကို ပြည်တွင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာ အရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီးပါပြီ။
မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် လ.၀.က မှူး ဦးကျော်ယဉ်ဦး လက်မှတ်ထိုးပြီး ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး ရေးခွင့် မပေးဘူးလို့ ကန့်သတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ တို့ရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကို မြန်မာအစိုးရက အလူးအလဲ ခံနေရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံညွန်းနဲ့ အညီ ဖြည့်ခွင့် ပေးဖို့ ပြောခဲ့တာကို ကမ္ဘာသိအောင် မိန့်ခွန်း မူရင်းအတိုင်း ဖြန့်ချီပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါအပြင် အခြားသော နိုင်ငံတွေကလည်း သံတမန် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖိအားပေးမှု ပေါင်းစုံ ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ လွှတ်တော်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီးခြား ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီး သံတမန် လမ်းကြောင်းနဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေ စတင်နေပါပြီ။
အဖက်ဖက်မှာ အကျပ်အတည်းထဲ ရောက်နေသူကတော့ မြန်မာအစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုး အမည်ကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ပေးဖို့ အစီအစဉ် လုံးဝ မရှိတဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တရားဝင် ဖြစ်ရေးအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်က သူတို့ လိုချင်တာကို ကြိုးစားနေသလို ကျွန်တော်တို့ဘက် ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အခွင့်အရေး တွေကို ပြန်လည် ရအောင် ကြိုးစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်း ကာလမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေက သန်းခေါင်စာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ချန်လှပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချန်လှပ်ခဲ့တုန်းကလည်း သူတို့ – အခု ပြန်ကောက်ဖို့ အသည်းအသန် လုပ်နေတာလည်း သူတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီ ဇတ်သွင်းလို့ မရတော့ ကွက်လပ်ထားပြီး ပါဝင်ကြပါလို့ စည်းရုံး ပြန်ပါတယ်။ ၀န်ကြီး၊ ဒု-၀န်ကြီး၊ ညွန်ချုပ်တွေ ကိုယ်တိုင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အကြိမ်ကြိမ် သွားပြီး စည်းရုံးရေး ဆင်းခဲ့ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ One Voice ကို မပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အခုတော့ နောက်ဆုံး အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။ မဟာ စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး စီမံကိန်းကြီးကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ သန်းခေါင်စာရင်း ကာလမှာ အစိုးရရဲ့ လက်ဆယ်ချောင်း မပြည့်တဲ့ ခရိုနီ အချို့နဲ့ နားမလည်တဲ့သူ ဆယ်ဂဏန်း လောက်ကို ဘင်္ဂါလီ ဇတ်သွင်းခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလူတွေကို နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကဒ်ပြားတွေ နေ့ချင်း ညချင်း ထုတ်ပေးမယ်လို့ ၀ါဒဖြန့် နေပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ ၀ါဒဖြန့်ရုံသာမက လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဆယ်ဂဏန်း လောက်ကို နိုင်ကဒ်တွေ ထုတ်ပေးပြီး သန်းဂဏန်းကို မက်လုံးပေးပြီး ဇတ်သွင်းဖို့ ရင်းနှီးပါလိမ့်မယ်။
ဒါက စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ။ အမိုးပွင့် အကျဉ်းထောင် ဘ၀ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အတွက်တော့ အင်မတန်ကို စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မက်လုံး တစ်ခုပါ။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အလိမ်ခံရတာ များနေပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေး အတွက် ဆက်လက် ရပ်တည်ပါ။
လ.၀.က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီကို ယုံရင် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသလို ဖြစ်လိမ့်မယ် .